फेन बिङ्गबिङ्ग र ली चेनको समबन्ध धरापमा| Nepal Pati
एजेन्सी । सबैभन्दा धेरै पारिश्रमिक लिने चिनियाँ कलाकार एवं अभिनेत्री फेन बिङ्गबिङ्गले गत बिहिबार घोषणा गरेकी छिन्, उनी आफ्नो सम्बन्धलाई बिराम दिन गइरहेकी छिन् । फेनले आफ्नो ट्वीटर एकाउन्ट मार्फत ली चेनसँग पारपाचुके गर्न गएको खुलासा गरेकी हुन् ।
चालिस वर्षीय ली चेनसँग पारपाचुके गर्न तयार फेनले भनेकी छिन, “एक जीवनकालमा हमेशा धेरै विभाजन र अलबिदा हुने गर्छन् ! जुन ढंगले तपाइँले मलाई समर्थन र प्रेम दिनुभयो त्यस निम्ति धन्यवाद । हामी सबै ‘हामी’ हुन् सक्देनौं । तर हामीहरु अझै छौं ।”
गत बुधबार मात्र दक्षिण कोरियाली अभिनेता सोङ हाय क्यो र सोङ् जोओंग कि को पारपाचुके भएको थियो । लोकप्रिय कोरियाली नाटक ‘वंशज अफ् द सन्’ का कलाकारले भनेका छन्, ” उनीहरु दुई वर्षको वैवाहिक जीवन समाप्त गर्न गइरहेका छन् ।”
कोरियाली र चिनियाँ कलाकारहरुको पारपाचुके निर्णयसँगै एक शुभेच्छुकले ट्वीट गरेका छन्, “आज के हुँदै छ ? किन हुँदै छ ? ब्रेक-अप र पारपाचुके ! म अझै सोङको विछोडबाट तंग्रिन सकेको छैन ! फेनको बज्र ममाथि बजारिदै छ । “